Bata ụtụ isi | Importgbọ M Mbubata
Kọwaa ụtụ isi mbubata
Anyị nwere ike inye aka na usoro ahụ dum, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụkwu gbasara ụtụ isi nwere ike ị nweta mgbe ụgbọ ala gị debanyere aha na United Kingdom, wee gụọ n'ihu.
Ụgbọ ala gị ọ nọ na EU? Ọ bụrụ na ị na-ebubata ụgbọ ala nke abụọ n'ime UK site na EU, ị ga-akwụ ụgwọ VAT belụsọ ma ị na-ebute ụgbọala ahụ na United Kingdom n'okpuru atụmatụ ToR. Gaghị akwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla, yana maka ụgbọ ala, ihe karịrị afọ iri atọ, ihe VAT belatara na 5%. Tupu Brexit, enwere mbugharị ngwa ahịa n'efu, mana nke a anaghị emetụta dịka United Kingdom hapụrụ European Union ugbu a ka ọnwa Jenụwarị 2021. Nke a pụtara na ụgbọ ala ọ bụla na-abata na-agbaso iwu ụtụ isi nke wepụrụ EU. Ọ bụrụ na ị na-akwaga UK ma chọọ ibute ụgbọ ala gị, ịgaghị akwụ ụgwọ mbubata ma ọ bụ VAT ọ bụla. Ọ bụrụ na ịmaghị n'aka ma ị tozuru maka enyemaka ToR egbula oge ịnweta nhota anyị ga-enye gị ozi ndị ọzọ. Kedu maka brexit? Kedu ihe bụ atụmatụ ToR?
Kedu ihe ọzọ ị chọrọ ịma? Ọ bụrụ na ibubata ụgbọ ala site na mpụga European Union (EU) nke arụkwara na mpụga EU, a ga-achọ ka ị kwụọ ụgwọ mbubata 10% yana 20% VAT iji hapụ ya na kọstọm UK. A na-agbakọ nke a na ego ị zụtara ụgbọ ala na obodo ị na-ebubata ya.
Ọ bụrụ na ị na-ebubata ụgbọ ala site na mpụga EU nke arụrụ na mbụ na EU dịka ọmụmaatụ Porsche 911 wuru na Stuttgart, Germany. Ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ dị larịị nke bụ £ 50 wee kwụọ 20% VAT iji hapụ ya na kọmpụta UK.
Ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ bụ kpochapụwo, mgbe ahụ ohere ị nwere bụ na ị gaghị akwụ ụtụ isi ọ bụla. Mana biko nweta ntinye akwụkwọ ka anyị nwee ike nye gị echiche ziri ezi maka ụgbọ ala gị.